Zimbabwean Church Groups Urge Prayer, Release Of Election Results
The Christian Alliance, a coalition of Zimbabwean churches working for the peaceful resolution of the country's post-election standoff, said Monday it is organization prayer meetings in the lunch hour throughout the country until the crisis is resolved.
The Christian Alliance last week publicly warned to opposition leader and presidential candidate Morgan Tsvangirai to exercise caution negotiating with President Robert Mugabe and his ZANU-PF party as to forming a government of national unity.
Christian Alliance spokesman Jonah Gokovah told reporter Jonga Kandemiiri of VOA's Studio 7 for Zimbabwe that there are many unanswered questions in the wake of the elections, prompting the group to seek God’s intervention for Zimbabwe.
The Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe voiced "deep concern over inordinate delays” in the release of the presidential election results, urging the Zimbabwe Electoral Commission to “urgently release and publicize them.”
The Catholic group said the delay is “stretching the patience of the people to the limit,” adding that if the electoral commission has the public interest at heart it should release the presidential election results “without further equivocation.”
A statement issued by the group said that the electoral commission's autonomy and professionalism had been “seriously eroded and deeply compromised, reinforcing accusations of embedded partisanship and bias.”